EXO ဖျော်ဖြေပွဲလာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကို Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ D.O. – Trend.com.mm
EXO ဖျော်ဖြေပွဲလာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကို Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ D.O.
Posted on December 30, 2019 by Noel
EXO အဖွဲ့ရဲ့ “EXO PLANET #5 – EXplOration [dot] –” ဖျော်ဖြေပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ဆိုးလ်မြို့၊ KSPO Dome မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပြီး ထိုဖျော်ဖြေပွဲကို D.O. ကလည်း လာရောက်အားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
D.O. က စစ်မှုထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်လို့ သူ့ကိုဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာမြင်တွေ့လိုက်ရတာဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် အံ့သြပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အလွမ်းပြေစေခဲ့ပါတယ်။
D.O.က ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစတင်ပြီး စစ်မှုထမ်းဆောင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ညီအစ်ကိုတွေကို အားပေးဖို့ မပျက်မကွက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လိုက်၊ဗီဒီယိုတွေရိုက်လိုက်နဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူ့ကို ပရိသတ်တွေကလည်းမြင်တွေ့ခဲ့သလို တွစ်တာတွေမှာလည်း သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေ အများကြီးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
EXO အဖွဲ့ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊၃၀၊၃၁ ၃ရက်တိုင်တိုင် “EXO PLANET #5 – EXplOration [dot] –” ဖျော်ဖြေပွဲကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။D.O. ကတော့ ၂၀၂၁ ၊ဇန်န၀ါရီလမှ စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။D.O. ကိုလွမ်းနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်း အလွမ်းပြေအောင်
경수 인사했어여 👋👋 pic.twitter.com/ewhdSUyT3l
— 🐍 (@imdd_) December 29, 2019
ㅠㅠ 천사 ㅠㅠ pic.twitter.com/RzhSo0JtSU
— AngelHyunee (@baek_js9256) December 29, 2019
제가 오늘 누구를..봤냐면요..
도경수요 ㅠㅠㅠㅠ 우리경수 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 진짜 깜짝놀라서 손도 벌벌..
경수야.. .. ㅠㅠ 진짜보고싶었어 ㅠㅠ#우리경수 pic.twitter.com/z7djtZDPTO
— HIS'D (@HisD0112) December 29, 2019
191229 EXplOration dot #디오 #도경수 #DO(D.O.) #KYUNGSOO
5월에 마지막으로 만나고 군입대후 처음으로 보는 너의 모습이였는데 지금 이순간이 너무 행복해ㅠㅠ 앵콜때 핸드폰으로 사진찍는걸 보면서 정말 예쁜게 아니면 사진을 안찍는다는걸 생각하자마자 울컥하게 되더라 그만큼 예뻤다는거겠지? pic.twitter.com/NCEnARJyIj
— NO,LIMIT : 노리미트 (@__NOLIMIT618) December 29, 2019
2019 SBS Entertainment ဆုပေးပွဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဆုတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြလဲ??
Youtube က ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Shin Se Kyung